एकता जोगाउन पहल गर्ने खुमलटार बैठकको निष्कर्ष
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलग पार्टी बनाएर जान प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीति गम्भिर मोडमा पुगेको छ। समाजिक सञ्जाल मार्फत नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल स्वयंले पनि नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तर्विरोधले पार्टी एकता गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। उनले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको आशयसहितको गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै अलग पार्टी बनाएर जाने प्रस्ताव गरेपछि नेकपा शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि खुमलटारमा आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। आइतबार साँझ प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डसहित ६ जना सचिवालय सदस्यहरु सहभागी थिए। पार्टी नेताहरुले समेत बैठक राख्न माग गरेकाले ओलीसँग बैठक राखेर छलफल गर्न गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले बैठक नराख्ने जवाफ दिएको जानकारी प्रचण्डले नेताहरुलाई गराएका थिए।
‘बैठक किन राख्ने ? बैठक सैठक चाहिँदैन। बैठकको निर्णय मान्ने मान्छे म हुँ ? बैठक पनि म राख्दिन र तपाइँहरुले बैठक राख्नुभयो भने त्यसको निर्णय पनि म मान्दिन। टाउको गनेर बहुमत जुटाएर केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय बैठक गर्नुस् तर म मान्दिन,’ छलफलमा सहभागि एक नेताले भने, ‘र तपाइँहरुले छुट्टै बैठक गर्नुभयो भने त्यसको बदला म ठुलो एक्सन लिन्छु। त्यसैले बरु पार्टी अलग अलग गरौं।’
ओलीको यस्तो भनाईपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तो बाटोमा जान नहुने जवाफ दिएका थिए। आइतबार बिहान मात्रै पनि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर कर्णालीका सन्दर्भमा पार्टी फुटाउ भनेको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए। आइतबार खुमलटारमा नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहभागी थिए। खुमलटारमा सहभागी सचिवालय सदस्यहरुको भेलाले पार्टी फुटाउन नहुने निश्कर्ष निकालेको छ।
‘पार्टी कुनै हालतमा फुट्न दिनुहुँदैन। अहिलेको आन्दोलनको आवश्यक्ता, कार्यकर्ताको चाहना र जनताको जनादेश अनूरुप हामी जानुपर्छ त्यो फुट होइन,’ खुमलटारमा भएको छलफलको निश्कर्ष रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। ‘त्यसैले बैठकबाटै निश्कर्ष निकाल्ने र पार्टी एकता बचाउने अचुक अस्त्र पार्टी निर्णय सबैले मान्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छौ’, श्रेष्ठको भनाई छ।